१९ वर्षीया स्वस्तिका लिम्बूको रहस्यमय मृत्यु ! – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
१९ वर्षीया स्वस्तिका लिम्बूको रहस्यमय मृत्यु !
बाँके । नेपालगन्जमा १९ बर्षीय स्वस्तिका लिम्बूको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको छ । ६ महिनाअघि नेपालगन्ज भृकुटी चोकका आशिश बुढा क्षेत्रीसँग प्रेम बिवाह गरेकी लिम्बुको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको हो ।
स्वस्तिमा श्रीमान मुकेशसँग नेपालगंज उपाहमनगरपालिका-१० भृकुटि चोकमा बस्दै आएका थिए । आइतबार दिउँसो स्वस्तिकाकाे शव आफ्नै कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकाे थियाे । त्यसपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरी घटनास्थलमा आईपुग्दा स्वस्तिकाको शव खाटमा सुतेको अवस्थामा भेटिएको थियो ।
मृतक स्वस्तिमाको शरिरमा निल, चोट लाग्नुकासाथै अस्वभाविक सुन्निएकाले उनको हत्या नै भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएकाे स्थानीय भीम लिम्बुले बताए । स्वस्तिकाको माइती पक्षले पनि आशिशले नै हत्या गरेको आरोप लागएका छन् ।
भिम लिम्बुका अनुसार मृतक स्वस्तिकाले आइतबार मध्यान्ह १२ बजे तिर नयाँ बर्ष मनाउन माईत घर आउने भनेर फोन गरेकी थिईन् । तर श्रीमान आशिशले माइत जान नदिएको माइती उनले पक्षलाई खबर गरेकी थिईन् । त्यसको केही समयमै स्वस्तिकाको मोबाईलमा फोन नलागेकोले उनको हत्या भएको माइती पक्षको आरोप छ ।
घटना बैशाख १ गतेको भएपनि २ दिनसम्म आफुहरुलाई खबर नगरेको र तेस्रो ब्यक्तिबाट उनको मृत्यु भएको खबर सुनेकोले आशिशले नै हत्या गरेको माइती पक्षको दावी छ । आशिशले भने स्वस्तिमाले आमाहत्या गरेको बताउँदै आएका छन् ।
श्रीमान आशिश विगतका समयमा लागुऔशमा संलग्न रहेको र स्वस्तिमालाई प्रायजसो कुपपिट गरिरहने गरेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।
आशिश नेकपा सांसद नन्दलाल रोकायाका नाति हुन् । सोमबार दिउँसो सांसद रोकाया जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेर थुनामा रहेका आशिशसाँ भेट पनि गरेका थिए ।
सांसद रोकायाले फाटो खिचिएको मोबाइलसमेत थुतेर फ्याँक्दिएका थिए । प्रहरी कार्यलयमा गएर